इस्टर मा, यो मित्र र परिवारका चित्रित उसिनेर अन्डा, एक खेलौना जस्तै चित्रित गर्न दिन निर्णय गरे। यो लामो कुनै पनि परिवार तरिकामा ज्ञात गरिएको छ कसरी अन्डा डाई प्राकृतिक रंजक संग। अब धेरै तयार बनाएको कृत्रिम रंग, लेबल निस्तार-चाड को प्रतीक संग छन्। तर पुरानो तरिका कल्पना प्रयोग र इस्टर अद्वितीय विशेषताहरु बनाउन सक्छ थप आकर्षक छन्। त्यसैले अझै पनि कसरी प्राकृतिक रंजक संग अन्डा डाई सम्झना। यो अनुभव नगर्ने ती लागि, हामी पकाएको पहिले नै दाग सल्लाह दिन सक्छन् मेहनत उसिनेर अन्डा। गर्न पकाएको जब उनि फुट्छ छैन, तिनीहरूले एक घण्टा गर्मी मा बाँच्न गर्नुपर्छ, र पानी नुन को एक चुटकी थप्न राम्रो हुनेछ। चित्रित र चमक गर्न chilled अन्डा तेल rubbed।
staining लागि विधिहरू
1 प्याज बोक्रा। रंग को तीव्रता भूसी को मात्रा मा निर्भर गर्दछ। यसलाई खैरो रातोपना रातो देखि फरक हुन्छ। रातो प्याज husks बैजनी दिन्छ। यो रात खाना पकाउन र जिद्दी गर्न राम्रो छ। त्यसपछि शोरबा राख्नु अन्डा painting लागि पकाएको छ, महाराज अर्को 15-20 मिनेट। "संगमरमर" अन्डा र्याप husks को प्रभाव प्राप्त गर्न मुद्दा र्याप र यसरी रंग मा।
बेसार को2Staining। यो एक उज्ज्वल पहेंलो, एक घाम रंग दिन्छ। बेसार एक decoction तयार। यो त अन्डा जोश।
3. चुकंदर रस धेरै नरम प्रदान गुलाबी रंग। उबला अन्डा केवल गर्दा लागि यो धान्न पर्याप्त।
4 को पात को एक decoction गर्नुहोस् रातो बन्दागोभी को, तपाईं अन्डा लागि नीलो रंग प्राप्त। सूक्ष्मता र बन्दागोभी काट्नु, पानी6चमचा सिरका को आधा लीटर थप्न जोश र रात को लागि छोड्नुहोस्। शोरबा मा थप बन्दागोभी, अधिक तीव्र रंग।
5 पालुङ्गो एक उज्ज्वल हरियो रंग दिन्छ। यो अन्डा फोडा गर्न सम्भव छ।
6 प्राकृतिक रंग - बेरी। तपाईं natret खोल अन्डा ब्लूबेरी वा cranberries को gruel पकाएको यदि Otttenki नीरस गुलाबी र बैंगनी प्राप्त छन्।
कसरी प्राकृतिक रंजक संग अन्डा डाई बुझेर साथ को खोल मा ढाँचा सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
रंगाई मा ढाँचाको सिर्जना
यदि चित्रकला गर्न पूर्व gauze संग साग पात वा अन्य बिरुवाहरु, अन्डा र्याप को खोल लागू वा नायलन मोजा मा पैक र त्यसपछि रंग राख्नु 1. धेरै राम्रो प्राप्त छ। यो टास्ने टेप विभिन्न स्वरूपको काट्न सकिन्छ, को अन्डा मा छडी र अद्वितीय चित्र प्राप्त, तिनीहरूलाई रंग।
2. अन्डा mottled छन्। डिप भिजेको अन्डा ड्राई चामल कस को खोल पालन grits गर्न र रंग मा यस्तो ठाउँमा gauze र्याप। अण्डा शांत र staining पछि चामल मिलाउ।
3. पानी-रंग अलि तरकारी तेल खन्याउन भने, तपाईंले एक भव्य संगमरमर प्रभाव प्राप्त। छोडपत्र सुन्दर झूट चित्रकारी।
4 यो सम्भव भएको अन्डा shreds प्राकृतिक रेशम को कपडे रंग छ। को अन्डा कस त्यसपछि 20 मिनेट simmer, रंग रेशम टुक्रा बाँध शीर्ष मुद्दा र्याप खाना पकाउने अघि। सुन्दर र रेशम स्क्रापहरू हटाउन। रंग कपडा को खोल मा आफ्नो तस्वीर हुनेछ।
अब तपाईं कसरी प्राकृतिक रंजक संग अन्डा डाई थाहा छ। छोराछोरी मूल ढाँचाको सिर्जना समावेश, र परिणाम तपाईं प्रसन्न हुनेछ र छुट्टी तालिका सजाउनु हुनेछ!
कसरी मेरो छोरी को लागि आफ्नै हातले एक पुतली घर बनाउन?
Mishulin Spartak Vasilievich: प्रसिद्ध अभिनेता को जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
मास्को मा Sberbank मा साक्षात्कार कस्तो छ? कसरी सफलतापूर्वक बचत बैंक मा एक समूह साक्षात्कार पारित गर्न?
स्नेहक: कसरी चयन गर्न, समीक्षा, जहाँ किन्न
पाम तेल स्वास्थ्य को लागि हानिकारक छ